सानिमा बैंक शेयर ब्रोकरेज सेवा दिन अग्रसर, मर्जर जोडीकाे पनि खोजी गर्ने ! - Everest Dainik - News from Nepal
सानिमा बैंक शेयर ब्रोकरेज सेवा दिन अग्रसर, मर्जर जोडीकाे पनि खोजी गर्ने !
काठमाडौं, म‌ंसिर ६ ।
सानिमा बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभ्ने वा प्राप्ती गरेर आफ्नो सेवालाई विस्तारित बनाउन शेयर ब्रोकरेज सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। बैंकले मंसिर २७ गते आह्वान गरेको १४ औं वार्षिक साधारण सभामा सो प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंकले सम्बन्धित निकायको स्वीकृती लिई बैंक आफैँ वा सहायक कम्पनी मार्फत शेयर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बैंकको प्रवन्धपत्र संसोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सभामा गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सानिमा बैंकले १२ पदमा कर्मचारीको आवेदन खुल्यो
यसैगरी बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गर्ने, वा गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रकृया पूरा गर्न सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा प्रत्याजोन गर्ने भएको छ । हाल २ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेको बैंकले आवश्यकता अनुसार बण्ड, ऋणपत्र जारी गरि पूँजी परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था समेत थप गर्ने भएको छ ।
बैंकको चौधौं वार्षिक साधारणसभाले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको १४ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित र सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने छ ।
याे पनि पढ्नुस बैंकमा जागिर गर्ने हो ? सानिमा बैंकले माग्यो कर्मचारी
बैंकले राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौंमा मंसिर २७ गते बिहीबार बिहान १० बजे चौधौँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । सभामा बैंकले चुक्ता पूँजीको १४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित हुने छ । साधारणसभा प्रयोजनका लागि बैंकले मंसिर १४ गते बोक क्लोज गर्ने जनाएको छ ।
यसअनुसार मंसिर १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र नगद लाभांश प्राप्त गर्न र बार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
याे पनि पढ्नुस सानिमा इक्विटी फन्ड निष्कासन
हाल सानिमा बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना अवधिमा ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। एनएफआरएस प्रतिवेदन अनुसार बैंकले ४६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा (फ्रि प्रोफिट) आर्जन गरेको उल्लेख छ ।बैंकको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ४५ पैसा छ । मेरोलगानीबाट
ट्याग्स: sanima bank